तपाईँलाई निद्रामा घुर्ने, हात-खुट्टा धेरै चलाउने, छट्पटिने र सास रोकिने समस्या छ? छ भने उपचार विधि हेर्नुहोस – " कञ्चनजंगा News "
तपाईँलाई निद्रामा घुर्ने, हात-खुट्टा धेरै चलाउने, छट्पटिने र सास रोकिने समस्या छ? छ भने उपचार विधि हेर्नुहोस
No Comments on तपाईँलाई निद्रामा घुर्ने, हात-खुट्टा धेरै चलाउने, छट्पटिने र सास रोकिने समस्या छ? छ भने उपचार विधि हेर्नुहोस
साधारण घुराइ मोटोपन हुनेहरु अथवा अन्य स्वस्थ मानिसलाई पनि हुनसक्छ । तर यसमा ‘स्लीप एप्निया’ मा जस्तो सास रोकिने वा अक्सिजनको मात्रा घट्ने हुँदैन ।
‘स्लीप एप्निया’ हुनेहरुलाई निदाएको बेला गर्दनभित्रको श्वासनली साँघुरो भइ केही बेरको लागि निद्रा बन्द हुन्छ । जसका कारण शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्न थाल्छ, मुटुको चाल अनि प्रेसर बढ्न थाल्छ ।
‘स्लीप एप्निया’ भए–नभएको कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ ?
‘स्लीप’ एप्निया को उपचार विधि के हुन्छ ?
माथि बताइएका जस्तै तपाईँलाई ‘स्लीप एप्निया’ भएको रहेछ भने यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रोगको मुख्य उपचार भनेको सीपीएपी प्रविधिको प्रयोग गर्नु नै हो । सासको नली बन्द हुन नदिनका लागि तपाईँले राति नियमित रुपमा नाक वा मुख छोप्ने खालको विशेष मास्क प्रयोग गरेर सुत्नुपर्छ ।
– डाक्टर राजु पंगेनी – एमडी, डीएम, छाती रोग विशेषज्ञ, ह्याम्स अस्पताल
← गोबिन्दाले श्रीमतीसँग दोस्रो विवाह गर्नुको कारण खुलाए → विभिन्न कारणले मलेसियामा अवैधानिक भएर बसेका नेपालीसहित सबै विदेशी नागरिकलाई त्यहाँको सरकारले बिहीबारदेखि घर फर्किने अवसर